Daawo Sawirrada: Fannaanada Farxiya KABAYARE oo Muqdisho gaartay - Caasimada Online
Home Warar Daawo Sawirrada: Fannaanada Farxiya KABAYARE oo Muqdisho gaartay
Daawo Sawirrada: Fannaanada Farxiya KABAYARE oo Muqdisho gaartay
Muqdisho (Caasimada Online)-Magaalada Muqdisho waxaa galabta soo gaartay fannaanada weyn ee Farxiyo Maxamuud Cabdulle (Farxiyo Kabayare).
Fannaanada waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, fannaaniin, wariyaal iyo dadwweyne fara badan.
Fannaanada markii ay ka soo degtay diyaaradii ay la socotay waxaa sujuud la dhacday ayadoo faraxsan gudaha garoonka, waxaana ay sheegtay dareenkeeda in aaney la soo koobi karin marka loo eego in ay timid waddankii ay ka soo jeeday ee ay u dhalatay.
Fannaanada waxaa kaloo soo dhaweeyay barbaarta gaashaman kuwaasoo heeso iyo ammaan u jeediyay Kaba Yarre.
Fannaanada ayaa ka mid ah fannaaniinta gabdhaha ee sidda weyn waa yahan dambe ay u jecel yihiin dad weynaha gaar ahaan dhallinyarada.
Waxa ay maalmahan joogtay magaalada Nairobi halkaasoo heeso iyo bandhig faneed ay ku qabtay, waxaa la filayaa in isna uu magaalada soo gaaro fannaanka kale ee Axmed Rasto oo isna hadda ku sugan Magaalada Nairobi